Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Bilaha ahaa ee Jaliyada Ogadenya ee Minnesota oo si habsami ah u qabsomay.
Shirkii Bilaha ahaa ee Jaliyada Ogadenya ee Minnesota oo si habsami ah u qabsomay.
Posted by ONA Admin	/ April 5, 2015
Manta oy Sabti ahayd bisha April 4, 2014 ayaa waxaa xafiska Jaliyada Ogadenya ee gobolka Minnesota si habsami ah uga qabsomay shirkii xubnaha. Shirka oo ay xubnuhu soo buux dhafiyeen madasha ayaa waxaa lagaga arinsanayay howlaha shaqo ee horyala jaliyada Ogadenya ee gobolkani Minnesota.
Ayadoo hada wixii ka danbeeya la gali doono xiliga kualaylaha ayaa waxaa markasta xiligan ay jaliyadu dajisaa qorshayasheda sanadkan. Hadabaa maanta ayay mamulka jaliyada iyo xubnahuba islafalanqeyen howlaha halgan ee horyala xiligan waxayna hosta iskala xariqiin in la sii dardargaliyo howlobadan oo aya ka mid ahayen ababulka iyo arimaha bulshada, xuququl insanka, iyo ka hortaga talaboyinka cadowga gude iyo dibadba.
Dhanka kale waxaa khudbado qiira leh soo jediyaya Gudomiyaha Jaliyada halgame Cabdinasir Gani, Hoganka Cilmi badhista iyo qorshaynta ee JWXO mudane Mohamud Nur, Hoganka Garsorka JWXO mudane Ahmed Majerteen.
Isku soo duuboo shirkan balandhan ee jaliyda Minnesota manta isugu timid ayaa ah mid ay xubnuhu aad ugu riyaqeen waxayna nidir ku mareen in sandakan 2015 ay qadi donan talaboyin la taban karo oo horumar u leh geedi socodka halaganka Ogadenya.